China na ulo oru 3-Ply Synthetic Roofing Rootiing ShiningPlast
Inye ndi ozo anyi choro igho ahia. Anyị na-echepụtakwa ShiningPlast 3-Ply underlayment with lightweight nke na-agbakwụnye ihe mgbakwunye antiskom pụrụ iche na usoro ịmecha ihe iji mepụta nnukwu ngbanye n'etiti.
: Nrapado Onwe-Odikwa
3-Ply nwekwara ụkpụrụ ASTM Standard nke kachasị mma maka tensile na dọkatụrụ adọka. Ngwa ahịa anyị dị n'okpuru nwere ike ịgafe ule trapezoid.
Site na iji nrụpụta UV pụrụ iche, ịkwesighi ichegbu onwe gị banyere mkpughe ogologo oge n'oge ị na-ewu.
US ụdị EN ma ọ bụ EN kpuchitere ụdị ịkpa nkata dị iche iche.
·Na-adịgide adịgide: Underingment ShiningPlast siri ike ma na-adigide. Karịsịa o nwere ike akwa akwa. Ọ ga - eme ka eriri roora jiri akụkụ adọka adọpụ pụọ.
·Dị fechaa: ShiningPlast Sịntetik Underlayment nwere ngwongwo dị mfe nke na-eme ka ọ dịrị ya mfe iburu ndị roogo.
·Antiskid: Designedkpụrụ pụrụ iche eji arụ ọrụ / embossment na SBPP oyi akwa iji mee ka akụkụ ahụ dịkwuo elu. Anyị na-ejikwa klọọkụ kwụsịrị pụrụ iche yana ihe mgbakwunye pụrụ iche iji mee ka esemokwu dị n'etiti oghere ụlọ na akwa. Anyị na-eme akụkụ abụọ nke ọgwụ mkpuchi ahụ dị ka nsogbu gị.
·Na-eguzogide Weather: Ebe ọ bụ na mmalite nke yarn extrusion, anyị na-amalite ilekọta ụmụ nwanyị ọ bụla site na nnukwu annealing na ịbịaru oke, anyị na-ejikwa ha site na looms dị elu, site na T-Die Coating ruo mgbe ọ gwụchara, na ihe a niile ga-ahụ na ọ dị mma ịkwatu ọnọdụ. , ezigbo tensile / akwa na mbibi dị mma. A ga-enwetakwa nchebe gị ga-adị nchebe n'oge ikuku siri ike ma ọ bụ ihu igwe adịghị mma.
·Gosi Gosi: Ọbụghị naanị ebe a na-agbatị agbacha agbacha, ike imegharị ShiningPlast ga-abụ ihe mgbapụta site na ike dọkpụrụ.
·Mgbapụta mmiri: N'adịghị ka ọtụtụ oghere na oghere dị n'etiti teepu, ShiningPlast kachasị mma na -eme akwa na-eme ka inch ọ bụla nke akwa ahụ dị mmiri.
·UV-emegide: Anyị jiri ọgwụgwọ UV na njigide ya kachasị mma iji hụ na njigide ya mgbe ekpughere UV ogologo oge.
·A na-enwe Peel na Nrapado Stick
Ngwunye egwu gbazee di elu na-enye ndi ahia anyi ohere ozo / oru nke ya bu nnabata onwe ya. Enwere ike hazie igwe mgbakwunye ahụ dịka arịrịọ gị.
Nke gara aga: Cover kacha mma anti-oyi kpọnwụrụ - Lightful Poly Tarp - ShiningPlast
Osote: Kechie 2-Ply House